को हुन चुणामणि उप्रेती उर्फ गोरे ? यसरी समातीय काठमाण्डौबाट::Digital News Paper
को हुन चुणामणि उप्रेती उर्फ गोरे ? यसरी समातीय काठमाण्डौबाट
काठमाडौं । ३८ क्वीन्टल सुन तस्करीका मुख्यअभियुक्त चुडामणि उप्रेती गोरे पक्राउ परेका छन् । उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरिएको छ ।
उनलाई आजै मोरङ पुर्याईने प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएको छ । यस अघि भारतबाट पक्राउ परेको भनिएपनि प्रहरीले उनलाई काठमाडौँको गौरीघाटबाट आज बिहानै पक्राउ गरिएको जनाएको छ ।